20 PC mitambo inotambwa zvakanyanya nemutongi | la-manette.com
20 PC mitambo inotambwa zvakanyanya nemutongi
6 novembre 2021 ndima Mathilde Grimard
Zvinogona kuita sezvinopesana, asi iyi mitambo PC zviri nani kana ukashandisa gamepad pachinzvimbo chekare mbeva uye keyboard.
Iyo keyboard-mouse kumisikidzwa yakakodzera kune vakawanda pc mitambo, asi zvine musoro kushandisa controller kune chaiwo mhando semitambo yekutamba. mutambo, mazita emujaho nemitambo yekurwa. Masisitimu ese ari maviri ekutonga ane zvakanakira nekuipira, zvinoenderana nemaitiro emutambo wauri kutamba chero nguva.
RELATIVE: Iwo gumi akanakisa PC emitambo zvigadziriso
Hapana munhu wekutanga kupfura (the) haisi pane iyi runyorwa, nekuti (ine nharo) iri nyore kutamba nekhibhodi uye mbeva. Izvo zviri kutaurwa, isu takagadziridza runyorwa urwu nemamwe mashanu mamwe mazita anoridzwa zvakanyanya uchishandisa controller, kusiyana nembeva nekhibhodi.
Mazhinji mitambo yekunyaradza mazuva ano anowanzo guma paPC, uye mamwe mazita ari nyore kutamba neanodzora pane ane keyboard uye mbeva musanganiswa. Chero gadziriro yaunosarudza, itsika inoita kukwana; Saka zvinogona kuve zvakaoma kuchinja kubva kukhibhodi uye mbeva kuenda kune controller mushure mekushandisa akawanda maawa pane yekutanga. Ndeipi mitambo yePC inofanirwa kutambwa nemutongi? Ichi chinyorwa chakawedzerwa kuti chisanganise mamwe mazita mashoma.
yakuza 0 haina kuvanza chokwadi chekuti inoitirwa kuve neruzivo nemubati. Chimwe chezvinhu zvekutanga zvinoitwa nemutambo wacho kupa yambiro inouratidza. Kiibhodhi uye mbeva zvinofanirwa kunge zvakanaka pakuongorora uye yakawanda mini-mitambo, asi ma controller anonyatsokodzera beat-'em-up mhando kurwa.
Yakuza 0 mutambo unofadza wakavhurika-wenyika une nyaya inonakidza inova sumo yakanaka yeiyi nhevedzano yenguva refu. Saka tora controller uye pinda mune shangu dzeKiryu neMajima.
RELATIVE: 10 zvinhu zvekuziva usati watanga mutambo Yakuza 0
Psychonauts 2 inogona kuonekwa sechinotsiva yemitambo yepuratifomu kazhinji, kunyanya iyo 3D. Kazhinji, mitambo iyi inobatsirikana kubva mukufamba kwakaringana kunopihwa netsvimbo yeanalogi, nepo ichiwanzo gadzirwa kuti ishandise mabhatani emudhiraivho zviri nyore sezvinobvira.
Psychonauts 2 inotora danho rinowedzera nekubatanidza hurongwa hwekurwa hunoda kukurumidza kufungidzira uye kubatanidzwa kwepsi simba vhiri, zvinhu zviviri zvinonyanya kunzwika pane controller.
Nekudzidzira kwakakwana, chero munhu anogona kugona chirongwa chekutonga; zvisinei, zvimwe zvinoda maawa mashoma. Rocket League inoshanda pamwe chete nekhibhodi uye mbeva sezvainoita nemutongi, asi vanhu vazhinji vanowanzoenda kwechipiri nekuda kwenhaka yemutambo sezita rekoni.
Kupfuura izvozvo, kutyaira Rocket League yakavhurwa zvizere neanodzora nekuti, pakupedzisira, keyboard haigone kunyatsoenderana ne360 ° rusununguko rweanalog tsvimbo. Iyo controller zvakare yakakwirira kumitambo yemuchadenga, iyo yakakosha muRocket League.
RELATIVE: Akanakisa Rocket League Mazano uye Manomano eVatangi
Paunenge uchitamba Monster Hunter World paPC, iyo yakanakisa kutonga sarudzo inoenderana nekuvakwa kwehunhu. Kana iwe uchitamba semurwi wemhando dzakasiyana, iyo keyboard uye mbeva zvinowanzosarudzika nekuti zvinobvumidza kune chaiyo chinangwa. Sezvineiwo, iyo controller inoshanda zvakanyanya kune melee fighters, kunyanya kana zvasvika kune cheni combos.
Verenga zvakare: Yakanakisa PC gamepads muna 2020
Monster Hunter akatanga hupenyu pazvinyaradzo, uye iyo nhaka inopesvedzera Nyika. Iyi mitambo yakagadzirwa nevanodzora mundangariro, kunyangwe Capcom yaita basa rakanaka rekugadzira iyo keyboard uye mbeva imwe inoshanda.
Imwe nyaya ine mamiriro ezvinhu, Hadhesi iri nani ine mutongi kazhinji yenguva. Zvimwe zvombo (Adamant Rail) zviri nani zvakanyanya nekhibhodi uye mbeva, kunyanya kune vatambi vanoda kubvisa auto-chinangwa.
RELATIVE: Iwo akanakisa mawebhusaiti ekurodha PC mitambo yemahara
Paunenge usiri kushandisa zvombo zvakasiyana-siyana muHadhesi, mutongi ndiyo mhinduro yakavimbika. Movements uye reflexes zvakakosha kuti urarame mumutambo weSupergiant, uye mikana yeZagreus inowedzera kana uchishandisa controller. Sezvineiwo, Hadhesi inotyisa zvisinei kuti unoshandisa nzira ipi yekudzora.
Kutamba Strider nekhibhodi uye mbeva zvinongo shamisa. Hapana imwe nzira yekuzvitsanangura nayo. Iyi padivi-yekupurudzira chiitiko chikuva chakavakwa kubva kumusoro kusvika kutsoka pane chigaro cheCapcom's classic arcade zita, uye rinoratidza zvakajeka mumutambo wemutambo. Izvo zvekutanga zvichiri kutamba, uye zvinoreva kuti unofanirwa kushandisa controller kuti unakirwe nazvo.
Kumhanya, kusvetuka, uye kukava zvinokurumidza uye dzimwe nguva zvinoda kukurumidza kufungidzira kudzivirira kukuvara uye / kana kufa. Nekibhodhi uye mbeva, zvakawandisa zvinogona kukanganisa nekukurumidza. Zvakanakisa kuramba uine controller uko mareflexes uye tsandanyama memory zvinokwanisa kuenderana nezviri kuitika pachiratidziri.
Kunyange zvichikwanisika kutamba mitambo yeArkham uchishandisa kiibhodhi uye mbeva (uye ndizvo zvakajairika), kune mashoma mashoma mapoinzi achienzaniswa neanodzora. Mutambo wacho unovimba zvakanyanya neotomatiki kunanga mechanics, izvo zvinoita kuti vatongi vanyatsokodzera mutambo.
Iko kunonyatso penya mutongi panguva yehondo sequences. Iyo fluidity yehondo system inodaidzira ndangariro uye reflexes izvo zvinoshandirwa zvakanyanya neakamanikana zvikamu zvemutongi. Izvo zvakatonyanya kuoma kuwana yakaoma uye elongated combos nekhibhodi uye mbeva.
13- Castlevania: Madzishe Emumvuri
Lords of Shadow's inokurumidza-paced hunhu zvinoreva kuti inokodzera zvirinani kudzora gamepad pane keyboard uye mbeva kutonga. Sezvo uyu usiri mutambo wekuti kurwa kuri kupfura uye kunangana nemazvo, mutambi anogona kubira nekucheka panguva yavo yekuzorora.
Pamusoro pezvo, Castlevania ine nhoroondo refu uye yakapfuma, kunyanya pazvinyaradzo apo vatongi vaive nzira yekutamba.Izvi zvinoreva kuti franchise yakashanduka zvakanyanya seri kwe sitaira iyi, kunyangwe ichipinda munharaunda ye3D.
Kuve neHalo: Iyo Master Chief Collection paPC yanga iri chikomborero, kana chete nekuti vatambi vakwanisa kutora mukana weinochiva mbeva uye keyboard combo. Nekudaro, mimwe mitambo mufranchise inoita zvirinani nemutongi, kusanganisira Spartan Assault uye Strike.
Iyo yepamusoro-pasi isometric maonero emutambo zvinoreva kuti markmanship haina kudikanwa senge mune FPS zita. Joystick ndiyo nzira yakakwana yekudzora hunhu uchitora mukana wekufamba kwayo uye kupfura system. Nepo kiyibhodhi / mbeva combo isiri iyo yakaipisisa pasirese, haina zvakare kunaka senge gamepad.
Verenga zvakare: Maitiro ekushandisa Xbox Remote Play kufambisa mitambo pa Windows 10?
11- Migwagwa Yehasha 4
Hazvishamisi. Mushure mezvose, Migwagwa yeRage franchise yakatanga pa16-bit Sega Genesis console muma1990, uye pakanga pasina mitambo yakawanda yekurwa paPC kare ikako. Migwagwa yeRage 4 yakazoita sequel yakanaka kune yekutanga trilogy.
Haasi iye chete tora zvakakwana manzwiro emitambo yepakutanga, asi inosuma akati wandei matsva ekudzora mechanics kuti zvinonhuwira zvinhu kumusoro. Kutamba mutambo pane kiibhodhi hakunakidze, uye hazvifanirwe kudaro. Batanidza chidhiraivho uye unzwe classic bhatani kuparadza sezvakarongwa.
10- Chero mutambo weAssassin's Creed
Iyo Assassin's Creed franchise haizivikanwe neyakaomesesa dhizaini yekutonga. Khibhodi nembeva hazvidiwe kutamba nhevedzano yemitambo senge Assassin's Creed. Uyu hausi munhu wekutanga kupfura kana mutambo wekutamba une madhiraivha akaomarara. Combat yakatwasanuka, uye mishoni zhinji inosanganisira mabasa akakosha sekupuruzira kana kuuraya. Mushure mekuedza ese maturusi, zvinova pachena kuti Assassin's Creed inoridzwa zvakanyanya nemutongi.
9- Middle-Earth: Mimvuri Yehondo
Mumutambo unoda kufamba chaiko kuve wakabira, zvidzoro zvinofanirwa kunge zviri sutu yayo yakasimba. Zvinonyadzisa kuti kurwa nemunhu pedyo nemadziro kunogadzira matambudziko e kamera izvo zvinokuvadza mutambo. Pakati-pasi: Mimvuri Yehondo haina kuoma kupfuura Batman: Arkham Knight, asi yakaoma kupfuura Batman: Arkham Guta.
Kana isu tikaisa parutivi chinangwa chearc, mutongi pasina mubvunzo anonyanya kushanda kuMiddle-earth: Mimvuri Yehondo.
Mumwe angashamisika kuti ndeupi mudziyo unonyatsokodzera Grand Theft Auto 5, sezvo zvinoenderana nebasa riripo. Kupfura uye kutyaira panguva imwe chete, kunzwa kwekhibhodi uye mbeva kwakakwirira.
Kune rumwe rutivi, kana mutambi achityaira motokari kana kubhururuka nendege, gamepad ndiyo yakanakisa peripheral yeGTA 5. Kazhinji, mutongi anorova keyboard uye mouse, kunze kwekuti mutambi ari kutamba nevamwe. mods.
7- Kusimuka kweTomb Raider
Kushandisa WSAD pane keyboard kushoma pane kushandisa gamepad kutamba Rise of the Tomb Raider. Mutambo uyu unobvumira mutambi kuita mafambisirwo ekutanga ekushambira, kukwira madziro uye kufamba / kumhanya. Iko hakuna akasiyana siyana ezvitsinga kana zvombo zvekushandisa.
Zvombo zvakaita seuta, pfuti, pfuti uye pistol zvinogona kugadzirirwa zviri nyore uchishandisa inotungamira padhi (D-Pad). Khibhodi nembeva zvinoshandawo, asi vashandisi vazhinji vanosarudza mutongi nekuda kwekunyaradza uye kuwanikwa.
6- Mweya yeRima
Mumutambo wakaoma seMweya Yakasviba, iwe unoda yakakwana peripheral. Zvichienderana nezvaunoziva kushandisa zvakanyanya, Mweya yeRima inogona kuve yakanakisa nekhibhodi uye mbeva kana gamepad. Haisi a MMORPG iyo inoda mapfupi ekhibhodi kana macros. Pane mabhatani akakwana pane controller kuti iwe utambe pasina kurova (kunze kwekunge nguva dzese dzaunofa).
Kana iwe wakaita seMezzPlays, wakarova Mweya Yakasviba neGitare Hero controller pasina kutora chero kukuvara! Usape mhosva Mweya yeRima kune yako controller, asi kune iyo yakaoma yakaoma.
Sezvineiwo, mizhinji mitambo yemavhidhiyo yemitambo inotambwa zvakanyanya nemutongi. Kiibhodhi uye mbeva hazvina kunaka, kunze kwekunge mumwe munhu asingawanzo tora controller. FIFA inoenderana neakawanda gamepads uye controller, asi maPC mavhezheni eiyo franchise haawanzo kuenderana zvakananga nePlayStation's DualShock.
Verenga zvakare: 6 zvinhu zvekuita nePS4 yako yekare, Xbox, kana imwe console
Muchidimbu, FIFA 20 haidi mafambiro chaiwo embeva, uye kushandisa kiibhodhi uye mbeva kunogona kunzwa kupikisa-intuitive.
Inoonekwa seimwe yemitambo yakaoma kwazvo ye2D munhoroondo yePC, Cuphead zvinounza dambudziko chairo nekuda kweayo animations anomhanya-mhanya uye kurwa kunotyisa kwevakuru. Iwe uchashamiswa neiyi kumhanya uye pfuti mhando yevhidhiyo mutambo wakafemerwa neiyo 193os.
RELATIVE: Sims 4 matipi emitambo uye matipi, kubiridzira makodhi ePC yako uye nezvimwe.
Isu tinoziva Cuphead yakaoma, asi chii chiri nani: keyboard nembeva kana gamepad? Mutambo uyu unogona kutaridzika wekare, asi unoshandisa zvidzoreso zvemazuva ano. Parry, fudza, mira panzvimbo, uye shandisa Super-Art vane mabhatani akapihwa. Cuphead's controls haina kuomesesa uye nekudaro haidi kushandiswa kwekhibhodi uye mbeva. Zvose zvinouya kune nyaya yekuda kwemutambo uyu.
Nepo Nioh 2 ichiri kuburitswa paPC, Nioh inowanikwa zvakanyanya muzvitoro zvakaita seSteam, Humble Bundle, uye Green Man Gaming. Uyu mutambo unodikanwa kuita-yekutamba, uye kusarudza mudziyo usiri iwo unogona kukanganisa.
Nioh haisi yekutamba-yekutamba ine mabhatani akawanda. Inogona kuridzwa zvakanaka ne gamepad. Batanidza Xbox One controller kana DualShock 4 kuPC yako uye ruzivo rwako ruchavandudzwa zvakanyanya.
Hollow Knight is Souls-like, Metroid-like uye Castlevania-like panguva imwe chete. Vanhu havabvumirani pamutambo waanonyanya kufanana nawo. Chokwadi, Hollow Knight mutambo unodikanwa unotambwa zvakanyanya negamepad.
Khibhodi uye mbeva hazvipe chero mukana kana uchitamba Hollow Knight, saka iwe unogonawo kunamatira kune controller. Rombo rakanaka mukuedza kurova mutambo uyu nekhibhodi uye mbeva; harisi chidimbu chekeke.
1- Dhiyabhorosi Anogona Kuchema 5
Mutambo uyu hausi wakaomesesa pane iyi runyorwa, asi unogona kunge uine kureba kwekudzidza. Dhiyabhorosi May Cry 5 haana kufanana nemimwe Dhiyabhorosi May Cry mitambo. Izvo zvinodzora zvakasiyana, asi zvese zvakafanana kuti controller ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Edza kushandisa WSAD setup, uye uchave nenguva yakaoma kukunda zvikara. Panguva imwecheteyo, Capcom yakagadzirisa iyo keyboard uye mbeva ruzivo kubva yapfuura Dhiyabhorosi May Cry mitambo. Kunyangwe zvese zvese, controller ichiri yakanakisa sarudzo.
Maitiro ekuvhura uye kudzima Hardware kumhanyisa muChrome
Attack On Titan: Zera, kureba uye zuva rekuzvarwa kweumwe neumwe munhu mukuru